पत्रकारलाई चुनावी चटारो : झापामा कसले मार्ला बाजी ? कोसँग कति मत ? - Jhapa Online
पत्रकारलाई चुनावी चटारो : झापामा कसले मार्ला बाजी ? कोसँग कति मत ?
झापा, २२ चैत । नेपाल पत्रकार महासंघको यही चैत २५ गते हुने चुनावका लागि उम्मेदवारी घोषणाको सिलसिला जारी छ । केन्द्रमा लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील एवम् समावेशी समूहले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारी नेपाल लगायत ११ पेशागत संगठनले चैत १८ गते काठमाडौंमा विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समूह घोषणा गरेको हो ।
त्यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रमेश बिष्ट रहेका छन् । कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी लगायतले प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगामी सोच भएका पत्रकार मिलेर महासंघको २६ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएको बताएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावमा केपी ओली पक्षीय प्रेस चौतारीले तीन वटै तहको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षमा निर्मला शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा माधव नेपाल, महासचिवमा बालकृष्ण बस्नेत, सचिवमा रामकृष्ण ज्ञवाली र कोषाध्यक्षमा कृष्ण गिरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
सोही खेमाले प्रदेश नं. १ को अध्यक्ष पदमा मोहन काजीलाई प्रत्यासी बनाएको छ भने झापा जिल्ला शाखा अध्यक्षमा विशाल नेम्वाङलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ ।
यता, प्रेस युनियन र प्रेस संगठनको लगायतको व्यावसायिक पत्रकारहरुको संयुक्त प्यानलले आज उम्मेदवार घोषणा गर्दैछ । प्यानलले एकराज गिरीको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रिन लागेको हो ।
माधव पक्षीय प्रेस चौतारीबाट अध्यक्षको प्रत्यासीको रुपमा चर्चामा रहेका पत्रकार तीर्थ सिग्देलको सम्भावना पनि जीवितै रहेको सो पक्षले जनाएको छ । चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ताको सम्मुखमा आइपुगेका बेला पनि नयाँ समीकरणको सम्भावना रहेको चर्चा समेत चलिरहेको छ ।
कोसँग कति मत ?
महासंघको झापा शाखामा नयाँ सदस्यता प्राप्तसहित कूल २५९ मतदाता रहेका छन् । प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस संगठन, फोनिज, प्रेस मञ्च नेपाल लगायतका पत्रकारका पेशागत संघसंगठन अस्तित्वमा छन् । त्यसमध्ये नेकपा विभाजनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र समर्थित प्रेस चौतारी र प्रेस संगठन ब्यूँतिएर अलग–थलग भएको छ । त्यसमा पनि प्रेस चौतारी टुक्रिएर केपी ओली पक्षीय र माधव नेपाल पक्षीय प्रेस चौतारी चुनावी मैदानमा छ ।
वर्तमान चुनावी आंकडा केलाउने हो भने प्रेस युनियन अहिले पहिलो शक्तिको रुपमा देखिएको छ । युनियनसँग ८५ मत रहेको स्रोतको दाबी छ भने चौतारीलाई दुई भाग गर्दा ओली खेमामा ७५ र माधव खेमामा ३५ मत रहेको भनिँदैछ । प्रेस संगठनसँग करिब ३५ मत रहेको दाबी गरिँदै भने अरु संगठनमा बाँडिएर रहेको विशुद्ध फोनिजकै मत भने १० को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । बाँकी रहेको करिब १० मत अन्य संगठनमा बाँडिएको विश्लेषण गरिँदै छ । आजको समाचार साप्ताहिक खबर छ ।
मेचीनगरमा गाउँको बीचमा कोइला कारखाना, स्थानीयलाई स्वास्थ्य समस्या